Indlela yokwenza i-ecobrick | Ecobricks.org
I-Ecobrick yakho yokuqala yiyona ebaluleke kunazo zonke
Ukwenza i-Ecobrick kulula futhi kuqondile. Ama-Ecobricks angenziwa ngabancane, abadala kanye nabo bonke abaphakathi-akukho mishini noma amakhono akhethekile adingekayo! Noma kunjalo, kuneziqondiso ezibalulekile okumelwe zilandelwe ukuqinisekisa izinga kanye nokusebenza kwe-ecobricks yakho.
Qinisekisa ukuthi uqala ukuhamba kahle-lokhu kuyindlela yokuphila yesikhathi eside ukuthi wena, umndeni wakho nomphakathi uqala. Ngokufanayo, i-ecobricks yakho izobeka isibonelo kubo bonke abakuzungezile. I-sub-standard ecobricks kufanele igwenywe njengoba izokwenyanya izinga lezimfenisha zefenisha, ukwakha nokusabalalisa komphakathi kwe-ecobricks. Ngesikhathi sokuqeqesha kanye namaphrojekthi ethu abaqeqeshi be-GEA bezinga lokubheka ngokweqile futhi abamukeli izinga elibi lezinga eliphezulu. Ngakho-ke sibeke lo mhlahlandlela wezinyathelo ezingu-10 ndawonye ukuze sikusize uqhubeke nohambo lwakho lwe-ecobrick.
1. Thola iplastiki yakho ilungile
Ama-Ecobricks akhiwa nge-plastic ehlanzekile neyomile. Qala ngokuhlukanisa ipulasitiki yakho ehlanganisiwe kuzo zonke ezinye izinto. Uma kukhona ukudla, amafutha noma ukungcola kwiplastiki yakho, qiniseka ukuthi ugeze bese usomile. Ipulasitiki engcolile ngaphakathi kwe-ecobrick iyoholela ekukhuleni kwe-microbiological kanye ne-methane ngaphakathi kwe-ecobrick yakho (isixazululo sepulasitiki engcolile ubone i-Ocean Ecobrick). Njengoba i-ecobricks ijwayele ukusetshenziselwa ukwakha ifenisha yasekhaya, kubalulekile ukuthi usebenzise ipulasitiki ehlanzekile. Ipulasitiki engcolile ingaholela ekuhloleni okungaqondakali, amabhodlela aqhekekile nakwezinye izikhathi ezingavamile, ama-caps aphuma.
2. Khetha ibhodlela lakho
Uma uqala i-ecobricking, kuhle ukukhetha uhlobo olulodwa lwebhodlela eliningi emphakathini wakho bese ulunamathela kulo. Uma ukhetha ibhodlela ozolisebenzisa, cabanga ngezinto ezintathu: ukutholakala kwebhotela, ivolumu, kanye nephrojekthi oyisebenzisayo i-ecobrick.
Ukutholakala: Into yokugcina ofuna ukuyenza yithengi iziphuzo ukuze ube nebhodlela lakho le-ecobricking! Maduzane abantu abaningi bazobe behlala emphakathini wakho futhi kuhle ukuba wonke umuntu asebenzise umkhiqizo kanye nebhodlela elifanayo. Qinisekisa ukuthi ukhetha ibhodlela wonke umuntu angafika kalula.
Umqulu: Khetha ivolumu yamabhodlela ofuna ukuya nayo. I-GEA Abaqeqeshi bafundisa ukugcoba ngamabhodlela ngaphansi kuka-600ml. Amabhodlela amakhulu ama-1500ml azothatha ipulasitiki eningi … kodwa futhi kuthatha isikhathi eside ukwenza! Amabhodlela amancane amavolumu avumela abantu abasha be-écobrickers ukuqeda ngokushesha i-ecobrick yabo yokuqala, futhi bafunde emaphutheni abo. Amabhodlela amakhulu angcono kakhulu kubantu abahamba phambili be-ecobrickers.
Iprojekthi: Ngokwakhiwa kwamamojula nge-Ecobricks, udinga amabhodlela afana nobukhulu obufanayo nobujamo. Ngamaphrojekthi wokwakha angaphandle, ukufana okufanayo akubalulekile kakhulu, uma nje ivolumu ingaguquguquki (okungukuthi yonke amabhodlela ama-600ml). Kuye ngobukhulu bokwakhiwa, uzodinga amabhodlela wesayizi ahlukene. Isibonelo, amabhodlela amancane enza izindonga ezinhle, futhi amabhodlela amakhulu enza amabhentshi amahle. Bheka Umhlahlandlela wethu wokwakha ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa ngezindlela ezahlukene zokusebenzisa izinto.
3. Thola induku yakho
Ama-Ecobrickers bathanda ukubiza ikholi yabo yokupakisha, i-wand magic yabo. Yenza ipulasitiki ibonakale! Ukunamathela kahle kuzokwenza umehluko omkhulu ekucubricking kwakho. I-bamboo nezinkuni zenza izinti ezinhle kakhulu. Ubukhulu benduku buxhomeke kuhlobo lwebhola ohamba nalo. Ufuna induku ngobukhulu cishe ingxenye eyodwa yesithathu ububanzi bokuvulwa kwebhola elijwayelekile – ngakho-ke cishe ngo-6mm. Ufuna induku yakho ibe cishe kabili ukuphakama kwebhodlela lakho, nge-tip ehlangene. Gwema izinti ezibukhali njengoba zingakwazi ukuqeda ibhodlela futhi ungathola iziphazamisi nezibhanki esandleni sakho.
Uma usuphethe induku ngobukhulu obuhle nobunjwa, usethe! Ungabe usinika abanye ukukopisha nokuphindaphinda. Yileyondlela i-GEA Abaqeqeshi bethu benza amashabhu abo – imilingo ethe xaxa – induku eyodwa iphendukela abaningi!
4. Ayikho ingilazi, insimbi noma ukudla
Yini ongayifaki ku-ecobrick yakho ibaluleke kakhulu njengalokho okwenzayo. Khumbula ukuthi sibeka iplastiki ngaphakathi ne-ecobrick ngoba iyingozi kulokhu. I-Metal, iphepha, amakhadibhodi, i-glass kanye ne-biodegradables ngeke ihlaziye i-biosphere- ngakho akudingeki ukuba ufake ebhodleleni. Qaphela ngokucophelela ukupakisha insimbi ebukhali noma ingilazi ibe yi-ecobrick-bangakwazi ukuphuka izinhlangothi bese bebeka ingozi yokuphatha. Kunezinye izixazululo zalezi zinto:
Iphepha nekhadibhodi lingashiswa ngokuphepha.
Izakhi zemvelo zingenziwa umquba.
I-metal nengilazi ingabuyekezwa kabusha.
5. Qala ngokungeza umbala ongaphansi
Isiqephu sokuqala sepulasitiki oyifaka ebhodleleni siyolinika umbala ophansi wokwakha. Khetha ipulasitiki elithambile ngombala oqinile, bese uyiphonsa phansi phansi kwe-ecobrick yakho. Faka ngaphakathi ngenduku yakho ukuze ugcwalise 1-2cms yokuqala ibhodlela (ungase ufune ukusebenzisa amaplastiki ambalwa ombala ofanayo). Izikhwama ze-Cellophane zisebenza kahle. Ngokuvamile izikole noma izinkampani zizocela abakwa-ecobrickers ukuthi benze imibala emibala yabo yomphakathi. Ngokunikeza phansi i-ecobrick umbala, uvula amathuba okuklanywa okumibalabala okwenza amamojula noma izindonga zokwakha.
6. Phakamisa ibhodlela eliqinile, xuba ama-plastiki lapho uya khona
Manje sekuyisikhathi sokupakisha! Sebenzisa induku yakho ukuphoqa phansi ipulasitiki nxazonke ngaphakathi ebhodleleni- hamba embuthanweni uphonse phansi phansi. Ukuze ukwandise inani labantu, kuhle ukuxuba okulula, bese kuthiwa i-plastic hard. Sika ama-plastiki amakhulu zibe izingcezu ezincane. Ezincane izingcezu, i-denser uyothola! Uma ngabe i-ecobrick yakho yokuqala, linga ngesinye isikhathi ukuze uqiniseke ukuthi uhamba ngomzila wakho wesisindo esincane.
Ingabe ucindezele kanzima? Ezimweni ezingavamile, uma usebenzisa inkinobho ebukhali, ibhodlela elincanyana noma amandla alandela kakhulu, i-ecobrick izoqhekeka. Ungesabi! Kodwa, kungcono ukuqala futhi. Amabhodlela akhuphukile angeke ahlale futhi angakwazi ukuvuza ama-plastiki. Sika ibhodlela livulekile, susa ipulasitiki bese uqala futhi. Ukusika amabhodlela kungabuyekezwa kabusha.
I-BONUS: Uma usufika phakathi kwe-ecobrick yakho, phakamisa ama-2-3cms wepulasitiki enemibala ekhanyayo. Ngokwenza isikhala esimhlophe seplastiki uzothola indawo ecacile ukuze ubhale i-Ecobrick yakho ngomaka omnyama unomphela.
7. Hlola i-Ecobrick yakho ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi
Emhlabeni jikelele, sithole ukuthi ukulinganisa okuhle okungu-0.33 g / ml. Lokhu kusho ukuthi ibhodlela le-600ml liyoba nesisindo esincane esingama-gramu angu-200 futhi ibhodlela le-1500ml liyoba nesisindo esincane esingama-gramu angu-500. Izinhloso ezincane zokubambisana zibalulekile ukuze kuqinisekiswe ukuthi i-quality ecobricks. Ukuhleleka kwekhwalithi kuqinisekisiwe ukwakha ukwakha okuhle, ukwenza okungcono ivolumu futhi kukhuthaze ukusabalalisa komphakathi kwe-ecobricks.
Hlola i-ecobrick yakho, bese uqopha isisindo kulebuli.
Ama-ecobricks athambile kakhulu angeke asetshenziselwe amamojula. Ama-ecobricks athambile kakhulu angaphathisa ukwakheka kwesakhiwo. Ngokufaka kakhulu ukupakisha ibhodlela, senza okungcono ibhodlela ukuthi sibambe epulasitiki. Okokugcina, i-ecobrick enhle kakhulu into ongayiqhenya ngayo! Lapho abanye bebona futhi bebamba, bayakuqonda ngokushesha ukuguqulwa kweplastiki evulekile ekwakheni isakhiwo esenzeke! Izinga elihle lekhwalithi nezakhiwo ze-ecobrick ziphefumula ngokuyisisekelo.
8. Rekhoda i-ecobrick yakho
Ngokulandela nokurekhoda i-ecobricks, ufaka amandla ekuqhubekeni kwe-ecobricking nokukhuthaza imikhuba emihle. Ukulandela i-ecobricks kuyisihluthulelo sokulungiselela amaphrojekthi wokwakha nokuqhubeka kwesikhathi eside kwe-ecobricking. Qopha idatha njengomenzi we-ecobrick, isisindo, ivolumu yebhodlela, ikhwalithi, njll. Le ndlela ungayilandela inqubekela phambili yomphakathi wakho.
Sisebenze kanzima ukwenza i-app yewebhu yonkana oyisebenzisayo ukuthi ungene ngemvume futhi uxhumane ne-ecobricks yakho nalabo abasemphakathini wakho. Siphinde senze ishadi lamaphuzu nesampula sefomu lokungena ku-Umbono wethu we-Vision Ecobrick ongabhalwa ikhophi. Vele uvakashele ku-www.GoBrik.com nesiphequluli sewebhu efonini yakho, ngena ngemvume nge-Facebook noma i-imeyili, udale i-akhawunti, bese uqala ukubhala i-ecobricks yakho. I-GoBrik izokwenza konke okunye-ukuhlanganisa izibalo zakho nomphakathi wakho.
9. Shayela i-ecobrick yakho
Engeza ilebuli noma Bhala ku-Ecobrick
Njengoba uqedela i-ecobrick yakho, qiniseka ukuthi ayiphuthelwe ukuchichima. Ipulasitiki akufanele iqhubekele ngokumelene nesembozo, kungenjalo i-lid ingalimala ngokuhamba kwesikhathi. Uma usuliwe uphawu, shayela i-ecobrick ngelebuli yamaphepha noma sebenzisa umaka omnyama onomphela. Kuye ngomsebenzi wakho womphakathi, idatha elandelayo iyasiza ukurekhoda:
Umkhankaso womphakathi ohlosiwe
I-serial Number (eyenziwe yi-GoBrik App)
10. Engeza umbono bese ugcina i-ecobrick yakho
Njengoba uqedela i-ecobrick yakho, qiniseka ukuthi awupakethe ukuchichima. Ipulasitiki akufanele iqhubekele ngokumelene nesembozo, kungenjalo i-lid ingalimala ngokuhamba kwesikhathi.
Abaningi be-ecobrickers bhala umthandazo noma umbono ebhodleleni kumakaki okuhlala unomphela. I-ecobrick yakho izohlala isikhathi eside. Kungani ungavumeli abazukulu bakho bazi ukuthi ucabanga ngabo? Ngokwesibonelo:
“Ngibheka izwe lapho ipulasitiki isetshenziswa khona ngokungajwayelekile futhi ngokuhlakanipha nokuthi siphila ngokuvumelana nemikhakha yemvelo”
Uma usuqedile, kuzodingeka ugcine izitho zakho ze-ecobricks kuze kube yilapho ukwanele ukuthi uphrojekthi. Gcina i-ecobricks endlini, ngaphandle kwelanga. Isinamathela ngokuzenzekelayo, nemikhawulo ikhonjiswe ngaphandle (ngale ndlela ungabona imibala okufanele usebenze nayo). Kuhle ukuthi i-ecobricks iphakanyiswe kancane ngenhla – amagundane aziwa ukuthi ahlamba amabhodlela!
Futhi ... ukwakha!
Uma une-Ecobricks eyanele usulungele ukwakha. Kunezinqubo ezinhlanu eziyinhloko zokwakha ngamabhodlela kanye ne-ecobricks. Ukulula, okusheshayo, futhi mhlawumbe uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lwe-Ecobrick, ukwenza amamojula e-Milstein wezakhiwo ezizungezile kanye namamojula we-Dieleman Lego wokwakha okuqondile. With amamojula ungakha amabhentshi, itafula, izihlalo, izakhiwo nokuningi.
Mhlawumbe ukusetshenziswa okungcono kakhulu kwe-Ecobricks kwakha izindawo zomphakathi ezihlaza. Ukusebenzisa umhlaba wendawo kanye ne-ecobricks wena nomphakathi wakho ungakha izindawo ezinhle ezicebisa imvelo yendawo.
Okulandelayo: Indlela Yokwakhiwa Ngama-Ecobricks
Kunezizathu eziningi ezinhle ze-Ecobrick. Thola lapha.
Izizathu eziyishumi eziphezulu.
Ukuze uthole isingeniso esibanzi ku-Ecobricking ulande umhlahlandlela wamahhala we-Vision Ecobrick. Thola Umhlahlandlela